Chips Mac T2 ayaa u nugul in la weeraro | Waxaan ka socdaa mac
Chips Mac T2 ayaa u nugul weerarka
Sida had iyo jeer, wararka noocan ahi waa kuwa ugu badan ee cinwaanada laga qoro, laakiin u nuglaanta runti maahan sida ay umuuqato waana badanaa in aan meel fog laga geli karin, waa inaad kumbuyuutar jidh ahaan u gasho tanna Badiyaa waa iska difaac wax ku ool ah oo ka dhan ah weerarada suurtagalka ah. Kaalay maxaa waxaa loo baahan yahay inay kombiyuutarkaaga hortaada ku xirmaan fiilo ka soo baxda USB C si ay u maamusho furin kumbuyuutarka gudahiisa qaabka Keyloggers ama barnaamijyo xaasidnimo la mid ah.
Shirkadda amniga ee Beljamka birtaBeak, Waxay si sax ah u sharraxeysaa tan oo ah in la helo marinka T2 ee Apple Mac-yada cusub ay leeyihiin waa lagama maarmaan in la buuxiyo shuruudaha qaarkood. Fiilooyinka ayaa ku xiran iyo in ay ku shaqeynayaan barnaamijka xun ee saxda ah inta lagu gudajiro nidaamka kumbuyuutarka.
Apple waxay ka tagtay shabakad khaldan oo ku saabsan qalabka amniga ee T2 macaamiisha, taas oo u oggolaanaysa qof walba inuu soo galo habka Qalabka Qalabka Qalabka (DFU) iyada oo aan laga helin milkiilaha. Qaabkan, waxaa suurtagal ah in la abuuro fiilo USB-C ah oo dhaafi kara tallaabooyinka amniga kombuyuutarka ee bilowga ah.
Taasi waa sababta fursadaha helitaanka ereyga sirta ah ee Mac aysan u fududaan sida ay umuuqato. Caqli ahaan processor-rada kasta ama nidaam hawlgalku waa u nugul yahay weerarada laakiin xaaladdan marka loo eego shuruudaha qaarkood ayaa loo baahan yahay si loo helo, Helitaanka jirka ee qalabka ayaa noqon doona waxa ugu weyn ee caqabad ku noqda weeraryahannada.
Dabcan, haddii ay helaan marin-u-helkan, waxay ku qasbi karaan Faylka Faylka Faylka ama inay xaddidi karaan kordhinta kernel-ka, taas oo u oggolaanaysa helitaanka dhammaan waxyaabaha kumbuyuutarka ku jira iyo milkiilaha saxda ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, dadka isticmaala adiga ama aniga maahan inay ka cabsadaan tan, si fudud waa inaan ka taxaddarnaa markaan ku xirneyno USB C meel aanan aqoon Mac-da ay ku isticmaali karaan waa Keylogger oo ay ku helaan diskiga, lambarka sirta iyo macluumaadka kale ee kombiyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Chips Mac T2 ayaa u nugul weerarka
Xaqiijiyay Oktoobar 13 iPhone 12 ayaa la soo bandhigay!